Geelle: Xalka Soomaaliya waa kacdoon - BBC Somali
Geelle: Xalka Soomaaliya waa kacdoon
Image caption Madaxweynaha Djibouti Cismaaciil Cumar Geelle
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waraysi dheer oo uu siiyay wakaaladda wararka ee Irin ee Qaramada Midoobay waxaa ka mid ah waxyaabaha laga waraystay xaalada Soomaaliya.
Su'aal: Somalia waxay dhibaato wayn ku haysay gobolka, gaar ahaan dalka Djibouti. Mararka qaarkood xaaladda Soomaaliya ma ka quusataa?
Waxaa uu madaxweynuhu ku jawaabay: Mararka qaar waan quustaa. Waxaan gelinay waqti badan iyo dhaqaale badan si aan isugu dayno inaan Soomaaliya ka saarno xaaladda ay ku jirto. Waqti xaadirkan, haddii aan si daacad ah kuula hadlo ma tilmaami karo wax aan iraahdo haddii sidaas la yeelo Soomaaliya sharafteedii iyo karaamadii ay adduunka ku lahayd ayay soo ceshanaysaa. Ma garanayo waxa daawadu tahay.
Jawaab:Wax kasta waan iskudaynay. Waxa keliya ee haray waxaa weeye baa laga yaabaa kacdoon dadweyne sida dalka Tunisia ka dhacday oo kale. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay u baahan tahay inay dadkan u sheegto: qaati baan idinka taagan nahay. Naga taga, idinma doonayno.
Waxaan ku jirnaa xaalad, markii uu qof madaxweyne noqdo, ay kooxi dhahdo ma ahan kii aan rabnay, waxayna badanaaba kooxuhu leeyihiin awood veto ah oo wixii aysan rabin ay ku horjoogsan karaan. Sababta keliya ee qofkaas ay ku diidayaan waxay tahay inaysn iyaga dantooda shakhsiga ah ku jirin. Wax shuqul ah kuma laha danta shacabka ama waxa dadweynuhu rabo.
Su'aal: waxaa jiray war sheegaya in Djibouti ciidan u dirayso Soomaaliya, ma diraysaa nabad ilaaliyeyaal, maxayse soo kordhinaysaa?
Waxaa uu Madaxweynu ku jawaabay. Ma dirayno ciidan dagaallama, waxaanse diraynaa tababarayaal. Waxaan doonaynaa inaan tababarno walaalaheen Soomaaliyeed, isla markaana aan ku beerno inay dalkooda iyagu iska leeyihiin, ayna yihiin kuwa laga rabo inay iyagu u dhintaan. Waa inay awood u yeeshaan inay ka hortagaan wixii ciidan kale ah ee ka horyimaad. Ujeedadeennu waxay tahay inaan dhisno awoodda iyo aasaaska ciidanka Soomaaliya.
Su'aal : fikraddaada, maxaa kale oo Qaramada Midoobay ama beesha caalamku qaban karaan si loo caawiyo Soomaaliya?
Jawaab: waxaan joognaa marxalad ay dadku haystaan maqas ay dalka ku jarjaraan. Maalintii dorraad waxaan maqlayay dowlad lagu magacaabay Koonfur-bari. Maraykanku waxaa uu sheegay inuu la hadlayo maamullada jira, hadda cid waliba taas ayay ku shaqaynaysaa.
Faragelin dibadda ah hore waxba uma tarin hadda kaddibna waxba ma tari doonto. Xalku waxaa weeye Soomaalida oo tiraahda waxaan joojiya. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko dadka Soomaalida oo yiraahda waan ka dheregnay barakac, qaxooti gelid iyo dagaalka qoriga.